"I-Tablet" noma "isinkwa" e asemthethweni ibizwa ngokuthi UAZ-452. izici Kobuchwepheshe umshini Ungayisebenzisa kuze kube yilolu suku. ekukhiqizweni waqala ngo-1965. Le moto combi ezimbili oluvala amasondo, okuyinto has a permeability okusezingeni eliphezulu. Igama elithi "isinkwa" kwavela ngenxa zifana ngesimo isinkwa. UAZ-452 Engine iyunithi emelelwa GAS-21.
Ukuguqulwa "amaphilisi", ikhiqizwa 1965 kuya ku-1979, ayenendawo amasignali ithuba kungekho nto enemibala emihle. Lezi izibani esiyindilinga ukuma. egeleza imigqa wabusa ngokuya umzimba, okwakunginika ifana abathile okweqanda.
UAZ-452 namanje ekhiqizwa, okubonisa ukuthi impumelelo yayo emakethe yasekhaya. Ngo-2011, emikhulu sesimanje kwenziwa. Phakathi lezo zinguquko ezinqala kungenziwa kuphawulwe ukubonakala ohlelweni anti-lock, ukuqondisa amandla, izihlalo okuthuthukisiwe injini ukushintshwa. I last izakhi ezimbili zenziwa ngokuvumelana nezindinganiso "Euro-4".
I sibonelo yokuqala ngqá kwaba ibhokisi abadumile UAZ-452, eyayintula umnyango emuva. Ngenxa chassis yayo flat futhi convex "ubuso" eziningana, imodeli wabizwa ngokuthi "isinkwa", okuyinto zisasetshenziswa nanamuhla.
imodeli Restyled kwenziwa ngo-1985 - iyatholakala namuhla. Kushintshwe imodeli ithole amagama amasha. Umkhiqizi wakwazi ukunciphisa isisindo imoto, ekuthuthukiseni induduzo yayo. Yonke umugqa, eyayihlanganisa ngisebenzisa ikhumbi encane iloli ngokuthi i UAZ-452. Imininingwane ngemuva kokuqala zokukhiqiza balitshabalalisa lonke ilizwe.
tank fuel 56 amalitha. Ukuthwala nomthamo inguqulo yasekuqaleni - 1225 kg, entsha onobuhle sibalo lehla 925 kg. isisindo Gross ingeqi ayizinkulungwane 3. Kg lonke umugqa. Clearance izinga 220 mm. esikhundleni inhlangano yabantwana bakwa-umshini akashintshile kusukela ekuqaleni ukukhiqizwa - kuyinto Ulyanovsk isitshalo.
"Isinkwa" ekuqaleni ifakwe ama-ekseli amasondo amabili, injini isikhathi. Gearbox efakwe uhlobo lokukhanda. Kanye ukudluliswa kuhlukane ke ixhumeke monoblock. Yavulwa ngo esigabeni inqubo shift. Ukuze embonini yezimoto emhlabeni wonke idatha ezivamile sangaphandle imoto babe imingcele ngempela abavamile. Ngakho-ke ukukhanda UAZ-452 kwenziwa ngokushesha ngokwanele. Ibhokisi, esithathelwe njengesisekelo, ngesiNgisi okuthiwa curbover, okusho "injini ngaphansi ngaphambili."
Imodeli wanamuhla "isinkwa" akuyona okuningi ezahlukene kusukela sibonelo. Izinguquko nezabo. gearbox motor namabhuloho. Yiqiniso, le nkampani yanquma ngcono kubo bese ukuzivumelanisa nezidingo umshayeli yesimanje. Ukumiswa kanye ukudluliswa kancane kuphela ukulungiswa. Lena akuyona ngenxa ukwenqena zalesi sihlahla ukuze bachithe imali ethe xaxa, futhi ngesiphambano abadumile.
UAZ-452 Ukucaciswa ezikufanelayo ngisho inkonzo yomphakathi, itholakala izinguqulo eziningana. Kukhona ezinye (ethize) models ambulensi, iminyango yamaphoyisa. It kuncike isakhiwo sangaphakathi. Ngokwesibonelo, e imoto yakhelwe ukuthuthwa wezimpahla abagibeli, kukhona ukwahlukanisa ekhethekile phakathi nenye gumbi, ngokulandelana, ngenkathi misalignment imodeli asipheli.
Isimiso esifanayo uzaqiniswa nezihlalo. Inombolo yabo esiphezulu - 10. gumbi kungaba itafula, nezinye izinto ezifanayo. Vyshtampovki abophe namawindi etholakala ngazo zonke izinguqulo - ngisho noma kungukuthi okunikezwe wumenzi. Ngakho-ke, enifeza ukukhanda UAZ-452, izakhi ezidingekayo lingasethwa ngokuzimela.
Noma yimuphi umuntu kuyoba sobala ukuthi umshini ekhiqizwa engaphezu kwengu-50 ngaphandle izinguquko ezinkulu, ingaqhubeka ethandwa futhi uthenge kuphela uma kungekho izici ezahlukene kakhulu futhi eyingqayizivele ukubukeka nokusebenza. Izimbangi ku "isinkwa" emakethe yasekhaya sisekhona. Ngenxa amanani abiza kanye nokusebenza izinhlelo kakhulu, ihlala umholi phakathi nalesi sigaba. Engine UAZ-452 isebenza kahle futhi ngaphandle lezimanga.
Ububi esiphawuleka kunazo zonke umshini kwakuwukuthi bajwayelane umsebenzi izinhlelo zalo babe mathupha futhi kuphela umkhuba. Sikhuluma ukushayela futhi mayelana nokulungiswa injini. Kodwa ngisho lokhu kuntuleka is a plus. Njengoba Phiko eduze umshayeli ku gumbi, kungaba isikhathi ukulungisa nje wezangaphakathi "cool." Level Security (kokubili yekwentiwa) ku ezingeni eliphansi. Uma ubhekene neqiniso, "isinkwa" ongavikela umshayeli emiphumeleni elimazayo yengozi kuphela uzimele futhi ibhande. Umshayeli kuyodingeka ichithe imali eningi uphethiloli ngenxa yokuthi inkampani yenqaba ukufaka udizili iyunithi.
Emazinga nezindlela ezihlukahlukene zokusisebenzisa ekusebenziseni - yilokhu bangaziqhayisa "isinkwa". Imoto okuthwala phakathi kuka 1 no 10 abagibeli, futhi wezimpahla linesisindo 450 kg 1 tonne. Interior kungase kwenziwe okuhlukile ezimbili: senqola futhi wahlukaniswa. Kungenzeka ukufaka uhlelo ezinguquko umhlobiso ingaphakathi, ukwethulwa heater, itafula, dweba. Ngalezi izakhi, UAZ kuyoba umngane okunokwethenjelwa ngokuphathelene ukuzingela, ukudoba kanye bashaywe umoya elula. Zonke izindawo lapho kudingeka ezine-wheel drive, esiphambanweni be-Jomethri spaciousness, unqobe kalula onobuhle idatha omele uazovsky.
Ukulungiswa imifanekiso kusukela ngo-1985
Ngemva restyling models entsha Uthole nezinye izinkomba.
Zonke-wheel drive iloli waba UAZ-3303. I gumbi has izihlalo ezimbili, hood kwaba lid elula esikhiphekayo, futhi iningi izakhi zakhiwe noma ukhuni.
Van waba UAZ-3741. It has ezine-wheel drive, umnyango ezingemuva phezu enezinto emibili ohlangothini - eyodwa.
UAZ-2206 - ikhumbi, okuyinto angazamukela kusukela abagibeli 8 kuya ku-11. Umzimba senziwa ngokuphelele metal.
Amaqiniso mayelana imoto
UAZ-452, izici eziyokhanga hhayi kuphela abathengi yasekhaya, okwamanje edayiswa Japan. Kukhona club abalandeli kulo mugqa. Zonke ungakwazi ukuthenga omunye onobuhle ezihlongozwayo kanye isigwedlo ngakwesokunxele ayizinkulungwane 20 zamaRandi ..
Emdwebeni "Masha kanye Bear," omunye izinhlamvu (timphisi) bahlala ekwelapheni "isinkwa", okuyinto uthela eliqoshwe umbhalo othi "ambulensi".
Ngenxa yokuthi umshini ivuliwe ezishibhile ayo, yena njalo asitholayo izinguquko ezincane, ukuhleleka okuhle. Futhi-ke, ngokufanayo ekuguquleni igama okukhipha imodeli. Okwamanje, kunokungqubuzana ezifana "buhanter" futhi "buhammer".
Imoto ngokuvamile atholakala imidlalo ezinkulu ikhompyutha, ekhuluma omele eSoviet Union.
Ngesikhathi "isinkwa" kobunikazi kufanele bakhumbule lokho sisebenzelana, hhayi ukufanise ephezulu ekupheleni izimoto angaphandle, okuyinto kuyaqabukela ngobugebengu. umshini utilitarian awuzange eyenzelwe ride ukhululekile, futhi ukuba ahambe ohamba amakholomu amathangi. Army imishini akakaze athi uthando olusuka abavamile.
With an lula futhi engabizi ukulungisa reception esiteshini inkonzo, wonke amaphutha ngokuya induduzo nokwethenjelwa walulama ngokushesha.
Kunobufakazi obuthile bokuthi ukuthi zonke ezokuphepha yomsebenzi "isinkwa" ingcono kakhulu omunye onobuhle UAZ. Lokhu kungenxa yokuthi ukhetho senziwe izibhedlela ezingu-452, iziteshi zamaphoyisa ezimweni eziphuthumayo. Futhi baye kwenza kwaba nesidingo esikhulu nokwethenjelwa.
Imikhiqizo yenkampani German Febi: Izibuyekezo
Ukuhlolwa esizimele imoto ngemuva kwengozi: ukubuyekezwa. Kuhlola ukulimala imoto ngemuva kwengozi
Ukuxilonga sebhetri imoto. Isondlo nokubuyiswa komhlaba imoto amabhethri
Imishini ye "Fast kanye Furious 6 ': engenangqondo ezikhangayo
Mycoplasmosis e amakati: izimpawu kanye nokwelashwa
Manicure Iduna nail sula on izinzipho iDemo ekhaya